Maalinta: Oktoobar 19, 2017
Magaalada Bursa, dhismaha tareenka xawaaraha sare leh
Intii lagu guda jiray dhismaha tareenka xawaaraha ku socdaa meel u dhaw degmada Barbaros ee degmada Osmangazi ee Bursa, Demirtas, dumin ayaa dhacday intii lagu guda jiray rakibida buundada. Burburkii, maanta fiidkii 17.20 darajooyinka, Cusmaanada Degmadda Cusgazi [More ...]
Tahir Öztürk, oo ah ganacsade ka soo jeeda Denizli, wuxuu ku soo saaraa taraamyada hoos yimaada magaca sumadda leh ee Garatren ile oo leh nidaam tamar la cusboonaysiin karo isla markaana ku suuq geeya Turkiga iyo dibadda. Uğur Erdoğan, Madaxweynaha Rugta Ganacsiga ee Denizli [More ...]
Diyarbakır Dawlada Hoose ee Magaalada waxay sii waddaa howlaheeda adeegyo raaxo badan, rakhiis ah iyo badbaado aamin ah, 21 HA 892, 21 HA 891 iyo 21 DC 665 gaadiidka dadweynaha oo gaadiid siiya degmada Ergani. [More ...]
Gaadiidka baaskiilka ee gobolka ee gobolka Sakarya
Sakarya waxaa loo xushay gobol tijaabo ah oo ku saabsan faafinta baaskiillada. Fatih Pistil, Madaxa Waaxda Gaadiidka, ayaa yiri: Wez Waxaan kordhin doonaa shabakadeena jidadka baaskiillada oo dhererkoodu yahay 30 kiiloomitir. Waxaan ka dhigi doonaa qeyb baaskiil qeyb ka mid ah gaadiid isku dhafan. Wadooyinka Baaskiilka [More ...]
3 ee Antalya. Dadku waxay go'aansan doonaan Mashruuca Nidaamka Isgoyska Tareenka
Dowladda Hoose ee Magaalada Antalya, sida dhamaan mashaariicda waaweyn 3. Marxaladda ayaa sidoo kale dadweynaha weydiineysa mashruuca Nidaamka Tareenka. 5 Codbixinta oo ka bilaabmi doonta 08.00 maalinta Axadda Nofembar waxaa lagu qaban doonaa degmooyinka Muratpaşa iyo Kepez. [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 16 Oktoobar 2017 ayaa booqday Xarunta Dariiqa tareenka ee Suudaan Isniintii. Apaydın waxaa weheliyay TCDD la-hawlgalayaasheeda TOMLOMSAŞ, TÜVASAŞ iyo TÜDEMSAŞ Maareeyayaasha Guud. Wajahadda waraysiyada; gaar ahaan [More ...]
My hab kaalmo ah u helay ka yar ee Wasaaradda Shaqada iyo Amniga Bulshada ee Midowga Yurub iyo Financial Assistance Department of Development Hawleed Barnaamijka Turkiga by Horumarinta Waarta Barnaamijka Waxbarashada of Human Resources II sameeyay [More ...]
Khabiiradu waxay falcelinayaan dhibcaha ku jira Geeska Dhexe
Waxaa laga cabsi qabaa in biraha ku yaal aagga '900-mitir' oo ay weheliyaan Dahabka Dahab ay sii wadi doonaan waxyeelada dhismayaasha taariikhiga ah. Tan kale, Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul ee fulineysa shaqadan wax sharraxaad ah uma imaan HABERTURK laba [More ...]
Tradesman oo muujinaya jawaabtiisa tareenkiisa ee ku yaala magaalada Boosaaso
Intii lagu guda jiray dhismaha khadka tareenka ee T-2, kaas oo bixin doona gaadiid tareenka inta udhaxeysa Bursa City Square iyo Bursa Intercity Bus Terminal, dukaanleyda ayaa ka cabanaya xirnaanshaha dukaamadooda oo xiray wadada falcelinta. Bursa dhexe ee Cusmaangazi [More ...]
Mashruuca Ro-Ro ee Baaskiil-doonka ee Bursa wuxuu diiddan yahay garsoorka!
Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay qorsheyneysaa inay ka sameyso xaafada Yaliciftlik mashruuca Ketendere Ro-Ro Port bilooyin badan oo lagula dagaallamayo Mudanaha, waxay ku guuleysatay halganka sharciga ah. Bursa 1. Maxakamadda Maamulka, ee baarlamaanka mashruuca isku xirka dekedaha ee Magaalada [More ...]
Ashura Surprise ee Metrobus iyo Tram Rakaabka
Degmada Zeytinburnu, oo isku dayaysa inuu soo qabsado gurigiisa Cevizlimetrobus beerta canabka ah iyo rakaabka taraamka ayaa soo dhoweeyay ashura oo joogsatay. Muwaadiniinta qanciyay la-yaabkii kadib markii ay cuneen ashuraha waxay ku sii wadeen cunno wanaagsan. Barbaarinta iyo bacriminta ee Muharram Bear [More ...]
Mega liqay miisaaniyada furan mashaariicda!
Damaanad-qaadka Maaliyadeed ee la siiyo buundooyinka sida Eurasia Tunnel, Marmaray iyo Osmangazi Bridge iyo kirooyinka lagu bixiyo isbitaalada magaalada ayaa ka kooban boqolkiiba boqol ee miisaaniyadda 10. Uğur Gürses, qoraaga Hürriyet [More ...]
Transmaşholding ee Ruushku, oo ka mid ah shirkadaha dhismooyinka gawaarida ugu weyn adduunka isla markaana hoggaamiye u ah soo saarista gawaarida xadiidka tareenka, waxay soo saartaa gawaarida gaadiidleyda sida gawaarida korantada, dhulka hoostiisa iyo basaska tareenka. Madaxa Waaxda Arimaha Dibadda ee Transmashholding, oo la hadlaya Sputnik [More ...]
Rajada ah in laga noqdo mashruuca ballaarinta adeegyada xadiidka xawaaraha sare ee Russia ayaa la cadeeyay. Sida laga soo xigtay warbaahinta, hız Xawaaraha xawaaraha ee lagu dhawaaqay in la dhisayo inta udhaxeysa magaalooyinka Moscow iyo Kazan waxaa laga yaabaa inuusan gaarin Kazan gabi ahaanba. [More ...]